Maxaad ka taqaan Oslo University College (OUC)? | WWW.SOMALILAND.NO
Maxaad ka taqaan Oslo University College (OUC)?
Posted on Maarso 29, 2008 by weriye1
Waxay gaadhay xiligii waxbarashadda la dalban jiray, sidaa daraadeed waxaanu idiin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan Oslo University College oo ah goobta labaad ee ugu ardayda tacliinta sare dhigata ee dalku wax ka dhigtaan.
Warbixinta hoos ku qoran iyo ta kale ee aad ka heli doontid bogga jaamacadda ayaa ah mid af-soomaali ku qoran oo aanu jecelnahay in laga faa’iidayso.
Machadka sare ee Oslo (HiO) waa Machadka dawladda ee ugu weyn dalka oo ay dhigtaan arday kor u dhaafaysa 11 000. halkaan waxaa waxbarasho lagu siiya kuwa ay ka mid yihiin kalkaaliye caafimaad, macallimiin, dhaqaaleyahan, bulshoyaqaan, warqad daawoakhriye, suxufiyiin, barbaariye carrur, jirduuge, injineerka shaybaarka, maktabadyaqaan iyo sawiryaqaan.
HiO waxay leedahay 36 waxbarasho gundhig ah ee heerka waxbarashada bachelorka. Waxaa intaas dheer oo HiO bixisa waxbarasho mastar ee qaybo kala duwan iyo hal barnaamij ee doktorgrad. Kuwo badan oo ka mid ah waxbarashooyinka Machadku bixiyo waxay HiO ku tahay mida kali ah dhamman Norwey oo dhan.
Machadka sare wuxuu wax u bara jagooyinka dawladda iyo qaybo shakhsiyeed. Badi maheradaha khuseeya daryeelka bulshada waa laga matala halkaas, iyo waliba meheradaha khuseeya farshaxanka, isgaarsiinta iyadoo farsamada maamulku iyaduna ka mid tahay waxbarshooyinka Machadku bixiyo.
Af-ka sheeg iyo gacan ka qabasho
Qaybta ugu weyn ee waxbarashada la bixiyo waa waxbarashada la xiriirta gacan ka qabashada halkaas oo waxbarashada af- ka sheega iyo gacan ka qabashadu ay si aad ah isugu xiran yihiin.
Badi waxbarashooyinku waxay ka kooban yihiin muddo waxbarasho gacan ka qabad halkaas oo ardaydu ay ku tijaabiyaan qaababka xirfadahooda mustaqbalka.
Warbixintan oo dhamaystiran ka akhri bogga Oslo University College
Filed under: Waxbarasho |
« Waa maxey fiitamiin D? MAXAA DHACAYA HADII AAN KIRADA KU BIXIN WAAYO WAKHTIGEEDA? »